I-3 Iimpawu eziPhezulu zokuPhepheka kwe-IT Ukungaphumeleli kweProjekthi | IYO
Imisebenzi ayisoloko ilinganiseki, iqulethwe ngamacandelo amaninzi kwaye idlulisele ubunzima obuhlukahlukeneyo kulabo baqukiwe. Eyona nto iqhubekayo ayiyi kuhamba ngendlela esiyidingayo ngayo. Sivame ukuqhutyelwa ukuba senze isicelo sokufezekisa ngakumbi ngezantsi kwaye sisantya ngokukhawuleza kunokuba sithe ngqo. Ngokuphindaphindiweyo, sinokuvelisa kwimigudu yethu ngaphandle kwezinto ezi zigcinwe.
Amanqaku amanqaku aphambili adibanisa ukufezekiswa kwempumelelo, nangona kunjalo ezintathu zezinto eziyimfuneko ezivela kubambiswano kunye nokuhlalutya, ukuqhagamshelana okunyanzelisayo, kunye nokwahlula izinto ezifunekayo, ukunyamekela iiminqweno kunye nomsebenzi womsebenzi.
Ukwandisa iMfuneko, ukuLindelwa kwabathintekayo kunye nobunzima bomsebenzi
Abalingani banokuba nefuthe okanye baphenjelelwe ngumsebenzi-ngokukhethwa kwamathuba omsebenzi, ukunyakaza okanye umphumo-okanye banokubona ukuba bachatshazelwa. Impembelelo okanye ukubona umphumo ingaba yinto enobungozi okanye engafanelekanga kwimvelo.
Uninzi lwentsebenzo lunenani elininzi lamalingani. Ukuqaphela onke amaqabane akhupha impumelelo yokuphumelela. Kufuneka ukhusele kwaye ubhengeze iinkcukacha ezibalulekileyo malunga neemfuno zabo, ukuxhomekeka, iimpembelelo, ukufakwa kwamandla, kunye nokuchaphazeleka kwintetho, ukuphunyezwa kunye neziphumo zokugqibela. Ekuvukeni kokufumana le datha, kubonakalisa amaqabane njengempawu zabo. Oku kuya kwenza ukuba kuncinci ukufuna ukwakha inkqubo yokujongana nayo yonke iqabane. Ukugxininiswa kwandiso oluphambili kwiinkalo eziphambili kuyisisiseko sokuphumelela.
Unokongamela njani iminqweno? Ngokunxibelelana. Kubaluleke kakhulu ukuba kunxibelelwano oluninzi oluqulathekileyo olulungelelanisa ukulungelelanisa iqabane kunye namaqabane.
Enye inxalenye yesingeniso esisisiseko kukufunda ngokujongana. Iprojekthi yoLawulo lweProjekthi (PMI®) ibonisa ukuba i-90 yeepesenti yomsebenzi wecandelo loqhagamshelwano unxibelelwano, kuba nokuba kunjalo, akukhawulelwanga ukuthetha nje. Unxibelelwano olusemthethweni luquka ukulungelelanisa, ukusetyenziswa kweengxelo, ukudala iingxelo, ukuhlenga idatha ngokuqala ngokuhlanganisana omnye ukuya kwinye, njalo njalo. Ukwenza oku ngokwaneleyo, ufuna zonke ezizungeze ulawulo loqhagamshelwano lokuhlelwa. Imveliso yeliphi na ilungiselelo linokuhlukaniswa kwimibandela emithandathu ekufuneka ibuzwe ngokungenasiphelo: Ngubani, Yintoni, nini, phi, njani na?
Ngubani omele anikwe?
Yintoni ekufuneka inikwe?
Ngeliphi ixesha apho kufuneka ukuba kwenzeke?
Kufuneka kwenzeke phi?
Kuya kwenzeka njani?
Kutheni ku funeka kwenzeke?
Ngaphambi kokuba uqalise umsebenzi wakho, qinisekisa ukuba ulungelelanise zonke iinjongo, iindawo kunye nezinto ezifunekayo. Ukucaca kwizinto ezifunekayo kwaye ekugqibeleni uthayathe ukuthengwa ukusuka kubalingani abalulekayo. Ezi zinto ziyimfuneko, kunye neenjongo ezinxulumene nazo, iithagethi kunye nokunikezelwa, ziphendukele kumlinganiselo womsebenzi omele ugqityiwe kwaye uya kucocwa phezu kobomi bakho. Yiba njalo, kwithuba elihle lokuba ungaqali ngokuqonda okuqinileyo kwinto ozama ukuyifeza, akufanele uqalise ngaluphi na ululazo lwengcinga.
Kuya kuba nzima, ukuba kungenakwenzeka, ukwenza inkqubela ukusuka kwimbono yabalingani ukuba kukho ukungabikho kokucacileyo malunga nokuqonda kwabo kunye neminqweno. Yiyo le nto ibambiswano kufuneka ihlukaniswe kwaye iminqweno yabo ichithwe ngexesha elifanelekileyo kwi-life cycle yokuphila njengoko kulindeleke phantsi kweemeko.
Ukugcina izinto ezintathu eziphambili-ubungqina obubonakalayo kunye nohlalutyo lwabalingani bamashishini, ukudala nokusetyenziswa koqhagamshelwano olunyanzelisayo, kunye nokuqinisekiswa okusemthethweni kokubambisana kwemisebenzi, iminqweno yecalingani kunye nokuchithwa ngokuchanekileyo kobuninzi bomsebenzi-ekuphumeni kwegazi phakathi kokuhlela kunye nokusebenza kuphucula kakhulu amandla okuqhuba inkqubela phambili.